Phuza amafutha omnqumo esiswini esingenalutho siwusizo kakhulu. Ngisho okhokho bethu baye basebenzisa amafutha omnqumo njengoba okubuyisela, eqeda ukuvuvukala, i-ejenti ephulukisa. izingxenye zalo nethonya antioxidant ukuthi kunomthelela ukususwa ubuthi ubuchopho, kanjalo okhululayo prophylaxis yesifo i-Alzheimer nezinye okuthile engqondweni. Ngaphandle kweqiniso lokuthi izingxenye amafutha omnqumo ivikela amangqamuzana obuchopho kusukela ukuguga, futhi sikhiqize entsha, ngisho nalapho esegugile futhi ngemva kokushaywa unhlangothi.
Futhi uma une ingqondo enempilo, amafutha omnqumo esiswini esingenalutho kuyasiza ukucabanga ngokucacile, ukuze uqinise inkumbulo yakho kanye nempilo jikelele zobuchopho.
Ngenxa ekhethekile fatty acid eziqukethwe uwoyela kwenzeka e cholesterol igazi nekulawulwa semithambo odongeni oluqinisayo. Njengoba amafutha omnqumo kusiza ukukhula ithambo izicubu, kuyasiza kakhulu izingane.
Enye acid okunamafutha emafutheni ezifanayo Ukwakheka emafutheni ubisi womuntu. Ososayensi abavela eBrithani, kwatholakala ukuthi amafutha omnqumo kunciphisa ingozi yomdlavuza webele. Amafutha omnqumo futhi kuvimbela okuvela elula izimpawu (striae) emzimbeni, okungase kwenzeke ngesikhathi ekhulelwe noma okusheshayo ikhula ngesisindo. Enough ekuseni nakusihlwa ngemva eshaweni ukukuthinta ke ezindaweni eziyinkinga kakhulu - futhi ezinhle Velvety isikhumba Ilungiselelwe kuwe.
Futhi, thatha amafutha omnqumo esiswini esingenalutho, odokotela beluleka labantu abaphethwe izifo wokugaya ukudla, njengoba Uluchay wamathumbu, isisu, isibindi, amanyikwe, kusiza ukuphulukiswa izilonda duodenal nasesiswini. Kuzosiza amafutha omnqumo ukuqunjelwa, futhi lisetshenziswa ekwelapheni hemorrhoids, kuyasiza ukuba bakhiphe amatshe kusukela kwesinye nenyongo.
Essential-fatty acid, okuyizinto amafutha, ukukhuthaza ukuzinza we nezindlala ngokocansi kwabesifazane kanye kahle neqhaza nje ebamba isisu.
Amafutha omnqumo futhi uye ephulukisa izakhiwo, kusiza ukuphulukiswa ukusikeka, izilonda, izilonda.
Ngoba impilo kwesibindi womuntu ugcwale slags, ie izinto eziyingozi. Amafutha omnqumo iyindlela omnene kakhulu futhi emnene kuzo zonke ezaziwayo. Ukuze kwesibindi usebenze kahle, kubalulekile ukuthatha amafutha omnqumo esiswini esingenalutho ekuseni ngosuku 1lozhke. Ungase futhi gcwalisa amasaladi yabo futhi izitsha ezahlukene. Le ndlela yokuhlanza is ikakhulukazi Kunconywa ukuba Homeopath emhlabeni wonke.
Nokho uwoyela lisetshenziswa nasekuthandeni izinto abantu imithi. Uma ukuqunjelwa kufanele baphuze ngamafutha elingenalutho esiswini 1 isipuni, ukuphuza amanzi afudumele.
Lihambisana rosemary zasendle kusiza ngayo abandayo. Izifo zenhliziyo kufanele kuthathwe lihambisana garlic. Abantwana abane-whooping uwoyela ukukhwehlela omnqumo futhi iwusizo kakhulu uma mix it uju ngezabelo alinganayo. Futhi in wendabuko imithi babe zokupheka usebenzisa amafutha omnqumo ekwelapheni rheumatism, ubuhlungu ezindlebeni ukungazali besilisa. Esikhathini omnqumo iqukethe ngamavithamini A, D, E, lapho uwoyela rejuvenates kwayo yonke indikimba, kuqinisa izinwele nezinzipho, kuthuthukisa isimo sesikhumba. Kuyinto hypoallergenic ngakhoke bavunyelwe ukuthola yokungezwani komzimba abagulayo.
Phuza amafutha omnqumo Kunconywa esiswini esingenalutho isigamu sehora ngaphambi ukudla 1 tsp ekuseni nakusihlwa, noma 1 isipuni ekuseni.
Njengoba singabona, ukusetshenziswa la mafutha kumangalise kabanzi kakhulu, kodwa hhayi wonke umuntu angakwazi baphuze amafutha omnqumo esiswini esingenalutho. Izimo ngokuphathelene reception kwakhona abantu ukudla okunobuthi, ukutheleleka emathunjini kanye disorder esiswini njengoba kunomphumela laxative, okungase kuholele ekubeni uthunyelelwe i okubi kakhulu lesi sifo. Kumelwe sikhumbule ukuthi amafutha omnqumo kunomphumela choleretic, ngakho-ke uma amatshe atholakala enyongweni, kungcono uyeke. Lokhu kusebenza futhi abantu isibindi onesifo njengobe kunika ukucindezeleka okuningi kuyo. Kudingeka nokuba uqaphele uma hypersensitive.
Kodwa, noma kunjalo, ukusetshenziswa ku-olive namafutha awo kungaphezu umonakalo. Kufanele kuphawulwe ukuthi amafutha omnqumo Kunempilo kakhulu amafutha sunflower, equkethe semali cholesterol, kodwa abantu abaningi kakhulu esetshenziswa esifundeni izakhamuzi nashogo. Ngakho udle, nokho, amafutha omnqumo, musa skimp empilweni yakho!